Football Khabar » पिएसजी र रियल मड्रिड नेइमारको सम्झौता नजिक : मूल्य कति ?
पिएसजी र रियल मड्रिड नेइमारको सम्झौता नजिक : मूल्य कति ?
एजेन्सी, साउन २६
फ्रेन्च क्लब पिएसजी र स्पेनिस रियल मड्रिड ब्राजिलियन स्टार नेइमार किनबेचका लागि सहमति नजिक पुगेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । फ्रेन्च तथा स्पेनिस मिडियाले पिएसजी आफ्ना सर्वाधिक महँगा खेलाडी रियललाई दिन तयार देखिएको छ ।
नेइमार भित्र्याउन पूर्वक्लब बार्सिलोना पनि दौडमा छ । तर, पिएसजी नेइमारलाई बार्सिलोनाभन्दा रियललाई दिन इच्छुक रहेको बताइन्छ ।
अहिले पिएसजी र रियलबीच दुई अवस्थामा छलफल भइरहेको छ । पहलिो– एक सिजनका लागि लोनमा खेलाडी दिने–लिने । अर्को– खेलाडीसहितको डिलमा सहमति खोज्ने । पिएसजीले नेइमारका लागि कम्तीमा २४० मिलियन युरोसम्मको मूल्यांकन रियल मड्रिबडाट चाहेको छ ।
प्रकाशित मिति २६ श्रावण २०७६, आईतवार १६:१२